Lahatsary: ​​Lahatsary fiaran-dalamby, Lahatsary fiaran-dalamby haingam-pandeha, horonantsary TCDD, Tram Video
Nisy ny dinika tamin'ny fivoriana fampahalalana momba ny tetik'asa Metro, izay nokarakaraina mba hampahafantatra ireo mpikaroka ary ny injeniera. Ny tale jeneralin'ny Prota Engineering Prany Danyal Kubin, izay naneho ny fihetsiketsehana tamin'ny mpanao gazety nandritra ny fivoriana, dia namaly ny fanontanian'ireo mpikaroka sy injeniera. [More ...]
Ny filohan'ny İBB Ekrem İmamoğlu dia nanao ny diany voalohany amin'ny «Mecidiyeköy-Mahmutbey», izay dingana voalohany amin'ny Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro. İmamoğlu, izay nandinika ny foiben'ny fanaraha-maso tao Tekstilkent, ny teboka farany amin'ny fizotran'ny fitsapana, dia nanao kabary tamin'io fotoana io ihany. [More ...]
Noho ny fihotsahan'ny tany dia nianjera tao anaty renirano ny fiaran-dalamby nitondra entana an-taonany maro be, ny fiaran-dalamby nidina tao anaty renirano, ary niverina ho amin'ny ady. Ny adiresin'ireo sary dia nohajain'ny fiaran-dalamby latsaka avy tany an-tendrombohitra tany Etazonia [More ...]
Ny ekipan'ny oram-panala sy ny oram-panentanana TCDD dia miezaka mafy mba hiantohana fa tsy ho voakorontana ny fiaran-dalamby noho ny toetr'andro mangatsiaka sy ranomandry izay mahomby amin'ny Faritra Atsinanana Anatolia. Republic of Madagascar [More ...]
Tany Marmaray, nisy andiana nanatona ilay vehivavy te hametraka vola tao anaty karatry ny nangalatra ny volany. Ny vola nangalarin'ny roalahy sy ny ezaka ataon'ireo olom-pirenena hisambotra ny vahoaka dia hita taratra ao anaty fakantsary. Mahita vola amina karatra vehivavy any Marmaray [More ...]
Ny laharana faha-44015, izay mahatonga ny dia ny Eskişehir Konya dia mizara mofo eo akaikin'i Sülümenli ao Afyon ary manandrana miampita ny lalana amin'ny alàlan'ny fisakanana ny sakana raha mihidy ny sakana amin'ny ambaratonga hiampitana. [More ...]
Naratra tamin'ny fakantsary ny lozam-pifamoivoizana misy kamiazo mandeha amin'ny làlan'i Bağcılar Kabataş. Ny trame manompo olona an'arivony isan'andro dia mety misy lozam-pifamoivoizana indraindray. Indraindray ireo tram-by mifandona amin'ny fiara indraindray [More ...]
Ny lalana faharoa, izay nanomboka natsangana ao amin'ny seranam-piaramanidina Sabiha Gökçen tamin'ny 2015, dia mikasa ny hametraka ao anatin'ny serivisy amin'ny faran'ny taona 2020. 3 500 XNUMX namboarina mifanandrify amin'ilay làlana efa misy ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Sabiha Gökçen, seranam-piaramanidina ao Istanbul [More ...]
Filyos Port Superstructure Tender Hoentina amin'ity taona ity
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Cahit Turhan dia nilaza fa 2019 tapitrisa fitaterana TEU sy 11,6 tapitrisa taonina no nentina tany amin'ireo seranana tamin'ny taona 484 ary nitondra fiara 597 arivo tamin'ny lalamby Ro-Ro mahazatra tany ivelany. Fotodrafitrasa Turhan, fotodrafitrasa Filyos [More ...]
Drafi-pampandrosoana Kanal Istanbul
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Cahit Turhan dia nilaza: Tamin'ity taona ity isika dia hihinana pickaxe. Tsy misy fepetra amin'ny Montreux Straits Convention miaraka amin'i Kanal Istanbul [More ...]
Nisokatra ny tranonkala Kanal Istanbul
Ny Fiadidiana ny serasera dia nanangana ny tranokalany, "Kanalistanbul.gov.tr", izay ahitàna ny antsipirian'ny tetikasa Kanal Istanbul ary valiny amin'ireo fanontaniana rehetra. Nosokafana tamin'ny alàlan'ny Twitter ny tranokala antsoina hoe "Kanalistanbul.gov.tr" nomanin'ny talen'ny serasera [More ...]